Modelin'i Shina: orinasa sy mpanamboatra YM25BFN-165Hz | Seho tonga lafatra
Ny sary FHD dia tohanan'ny fihoaram-pahefana haingam-pandeha 165hz haingana mba hahazoana antoka fa na ny filaharana mihetsika haingana dia toa malefaka sy feno tsipiriany kokoa, manome anao izay nanampy fanampiny rehefa milalao. Ary, raha manana karatra sary AMD mifanentana ianao dia azonao atao ny manararaotra ny haitao FreeSync namboarina hanaraha-maso mba hamongorana ny ranomaso sy ny fangirifiriana rehefa milalao. Ho vitanao koa ny hanaraka ny lalao marathons amin'ny alina be, satria ny monitor dia manasongadina maodely amin'ny efijery izay mampihena ny fipoahan'ny hazavana manga ary manampy amin'ny fisorohana ny havizanan'ny maso.
24,5 "tontonana TN misy famahana FHD 1920x1080
Fotoana famaliana MPRT 0.6ms ary tahan'ny Refresh 165Hz
Asehoy ny fifandraisana Port sy 2 x HDMI
Tsy misy fangirifiriana na triatra amin'ny AMD FreeSync Technology
Ny famolavolana tsy misy rafitra dia mitondra ny traikefa tsara hita maso
FlickerFree sy Low Blue Mode Technology
Isa santionan'ny fitsapana:
Voltage fitsapana sy matetika:
Fanaparitahana ny harmonika tanteraka an'ny
Fatra refesin'ny refin'ny luminance
Famirapiratan'ny toetr'andro amin'ny toetr'andro:
Famaritana farany amin'ny ma-mode mazava indrindra
Famaritana avo lenta
Fatra fandrefesana herinaratra
Hery tena izy
Amin'ny maody (HDR), raha azo ampiharina
Maody tsy mandeha
Fomba fiomanana amin'ny tambajotra
P refes (W)
Hijery ny faritra amboniny, A (dm2)
Maninona no mampiasa Monitor 144Hz na 165Hz?
Inona ny tahan'ny famelombelona?
Ny zavatra voalohany tokony hapetrantsika dia ny hoe "Inona marina ny tahan'ny famelombelona?" Soa ihany fa tsy dia be pitsiny. Ny tahan'ny fanavaozana dia ny isan'ny fotoana asehon'ny fampisehoana mamelombelona ny sary asehony isan-tsegondra. Azonao atao ny mahatakatra izany amin'ny fampitahanao azy amin'ny taha tahan'ny amin'ny sarimihetsika na lalao. Raha sary 24 no asiana sary isaky ny segondra (toy ny fenitry ny sinema), dia mampiseho sary 24 isan-tsegondra fotsiny ny atiny. Torak'izany ihany koa, ny seho iray misy 60 tahan'ny fisehoana mampiseho 60 "frame" isan-tsegondra. Tsy tena frame izy io, satria hamelombelona in-60 isan-tsegondra ny seho na dia tsy miova aza ny pixel iray, ary ny fampisehoana dia mampiseho ny loharano nomena azy fotsiny. Na izany aza, ny fampitahana dia fomba iray mora foana hahatakatra ny foto-kevitra fototra ao ambadiky ny tahan'ny famelombelona. Ny taham-pahavitrihana avo kokoa noho izany dia midika hoe ny fahaizana mitantana taham-bidy avo kokoa. Tadidio fotsiny fa ny fampisehoana dia mampiseho ny loharano nomena azy fotsiny, ary noho izany, ny taham-pahavitrihana avo lenta kokoa dia mety tsy hanatsara ny zavatra niainanao raha toa ka efa ambony noho ny taham-bikan'ny loharanom-pahalalanao ny tahan'ny famelomana.
Rehefa ampifandraisinao amin'ny GPU (Card Processing Unit / Card Graphics) ny monitor-nao, dia hampiseho izay alefan'ny GPU aminy ny monitor, na inona na inona tahan'ny frame alefany, na ambany na ambany ny tahan'ny frame an'ny monitor. Ny tahan'ny haingam-pandeha kokoa dia mamela ny fihetsehana hatao amin'ny efijery milamina kokoa (sary 1), miaraka amin'ny fihenan'ny fihetsika. Tena zava-dehibe izany rehefa mijery horonantsary na lalao haingana.
Refresh Rate sy Gaming
Ny lalao video rehetra dia alaina amin'ny alàlan'ny fikirakirana solosaina, na inona na inona sehatra na sary misy azy ireo. Amin'ny ankabeazany (indrindra amin'ny sehatra PC), dia mandroroka haingana ireo zana-kazo arak'izay ahafahana mamorona azy, satria matetika io dia midika ho lalao milamina sy tsara kokoa. Hisy fihemorana kely eo anelanelan'ny frame tsirairay ary noho izany dia kely kokoa ny fidiran'ny fidirana.
Ny olana mety hitranga indraindray dia rehefa omena haingana kokoa ireo zana-tahiry noho ny tahan'ny hamelombelona ny fampisehoana. Raha manana seho 60Hz ianao, izay ampiasaina hilalao kilalao manome zana-kazo 75 isan-tsegondra, dia mety hiaina zavatra antsoina hoe "triatra mandriaka" ianao. Izany dia mitranga satria ny fampisehoana, izay manaiky ny fampiasa avy amin'ny GPU amin'ny elanelam-potoana somary mahazatra, dia mety hisambotra ireo fitaovana misy eo anelanelan'ny sary. Ny valin'io dia ny triatra sy ny fikosoham-bolo ary ny fihetsehana tsy mitovy. Lalao maro no mamela anao hisafidy ny tahan'ny endrinao, fa midika izany fa tsy mampiasa ny PC amin'ny fahaizany feno ianao. Maninona no mandany vola be amin'ireo singa farany sy lehibe indrindra toa ny GPU sy CPU, ny kapila RAM sy ny SSD raha toa ka hahay ny fahaizany ianao?
Inona no vahaolana amin'izany, mety manontany tena ianao? Taham-pamelombelona avo kokoa. Midika izany na mividy mpanara-maso solosaina 100Hz, 144Hz na 165Hz. Ny fanavaozana ny 60Hz ka hatramin'ny 100Hz, 144Hz na 165Hz dia fahasamihafana miharihary. Zavatra tsy maintsy ho hitanao fotsiny izy io, ary tsy azonao atao izany amin'ny fijerena horonan-tsary misy azy amin'ny seho 60Hz.
Ny tahan'ny famelomana ny adaptive kosa dia teknolojia vaovao manaparitaka izay nanjary nalaza kokoa. NVIDIA dia miantso an'ity G-SYNC ity, raha antsoin'ny AMD hoe FreeSync, fa ny foto-kevitra fototra dia mitovy. Ny fampisehoana miaraka amin'ny G-SYNC dia hanontany ny carte graphique amin'ny fomba haingana hanaterany ireo frame, ary hanitsy ny tahan'ny fanavaozana mifanaraka amin'izany. Hofoanana ny efitrefitra mandrovitra amin'ny tahan'ny endriny rehetra hatramin'ny farafahakeliny famelomana ny monitor. G-SYNC dia teknolojia iray izay andoavan'ny NVIDIA sarany ambony amin'ny fahazoan-dàlana ary afaka manampy dolara an-jatony amin'ny vidin'ny monitor. FreeSync kosa dia teknolojia loharano misokatra nomen'ny AMD, ary manampy vola kely fotsiny amin'ny vidin'ny monitor. Izahay Perfect Display dia mametraka FreeSync amin'ireo mpanara-maso ny gaming rehetra ho fanao mahazatra.
Tokony hividy mpanara-maso lalao mifanentana amin'ny G-Sync sy FreeSync ve aho?
Amin'ny ankapobeny, Freesync dia tena zava-dehibe amin'ny filalaovana, tsy ho an'ny fisorohana ny triatra fotsiny fa ny fiantohana traikefa malefaka kokoa amin'ny ankapobeny. Tena marina izany raha toa ka mihazakazaka fitaovana enti-milalao ianao izay mamoaka frame mihoatra ny zakan'ny fampisehoana anao.
G-Sync sy FreeSync dia vahaolana amin'ireto olana roa ireto amin'ny alàlan'ny fananana ny fampiroboroboana ny fampisehoana amin'ny hafainganam-pandehan'ireo sary izay omen'ny carte graphique, ka miteraka lalao milamina tsy misy tomany.
Inona ny HDR?
Ny fampisehoana haavo avo lenta (HDR) dia mamorona fifanoherana lalindalina kokoa amin'ny alàlan'ny famerenana karazana hazavana avo lenta kokoa. Ny monitor HDR dia mety hahatonga ny fisongadinana ho mazava kokoa ary hanome aloka manankarena. Tena ilaina ny manavao ny PC amin'ny monitor HDR raha milalao lalao video misy sary avo lenta ianao na mijery horonan-tsary amin'ny famahana HD.
Raha tsy miditra lalina amin'ny antsipiriany ara-teknika, ny fampisehoana HDR dia mamokatra tara-pahazavana lehibe kokoa sy halalin'ny loko noho ny efijery namboarina hahatratra ny fenitra taloha.
MPRT 1ms ho an'ny fampihenana bebe kokoa ny matoatoa mihetsika
Fahalalahana sy fitoviana
Ireo fifandraisana ilainao hifandray amin'ireo fitaovana tadiavinao, manomboka amin'ny solosaina finday ka hatrany amin'ny tadin'ny feo. Ary amin'ny 75x75 VESA, azonao atao ny mametraka ny monitor ary mamorona sehatr'asa manokana izay anao manokana.
Afaka manome singa fanampiny 1% (tsy manaka ny takelaka) an'ny monitor izahay.
Warranty Perfect Display dia 1 taona.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ity vokatra ity dia azonao atao ny mifandray amin'ny serivisinay.
Teo aloha: WC Series WC320WE
Manaraka: Modely: JM272QE-144Hz